Ey Magangalyo Gaadhiga Baska Cimilada Qaboobaha Oo Diiriyey Rakaabka | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYCoast Mediterranean07 AntalyaEygii magan gelyada u raacay baska qaboojiye ayaa kululey rakaabkii gudaha ku jiray
22 / 01 / 2020 07 Antalya, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY
Cimilada qabow, ayaa basku kululeeyay gudaha rakaabkii
Eygii, ee magan galyada baska ku seexday hawo qabow, ayaa diiriyey. Eygan, oo ku waayey milkiilihiisa Antalya isla markaana qabow qabow ku dhacay, ayaa magan galyo ka helay baska dadweynaha ee 07 AU 0180, kaas oo safar ku maray khadka Varsak-Faculty. Darawalka Taner Özgün, oo eyga quruxdiisa baska ku martiqaaday muddo 1.5 saacadood ah, ayaa u dhiibtay shaqaalaha Xarunta Dukaan ku-meelgaarka ah ee Antalya ee Derelict ee ku-meel-gaarka ah isaga oo rajaynaya inuu lahaado.
Antalya, oo maalmihii qabow laga dareemay, dhacdo ayaa ka dhigtay inay dhoola cadeeyaan. Ey oo magan geliyay baska dadwaynaha ayaa u safray Antalya si uu uga ilaaliyo qabowga. Dhacdadu waxay ka dhacday baska gaarka loo leeyahay ee lambarrada leh ee loo yaqaan 'VF01', kaasoo sameeyey safarka Varsak-Faculty. Darawalka Baska Taner Özgün ayaa orday ey isagoo rakaab qaadaya 100. Yıl istaagay wuuna baska raacay. Darawalka baska Taner Özgün ma tuujin eeyga uu u maleynayay inuu baska raacay si uu uga baxsado hawada qabow qabow ee banaanka ah.
MA OGTAHAY Muuqaal Video ah
Ey, oo u naxariisanaya qaabkiisa biniaadanimo iyo dhaqdhaqaaqyada qurxoon, ayaa rakaabkii kula raacay baska kulul. Damiirka Özgün, oo isagu sidoo kale ah lo 'xayawaan ah, uma oggolaan inuu ka tago eeyga, kaasoo leaks leeyahay, oo u muuqda inuu lahaa wixii uu qabtay, dariiqa. Wuxuu ku sugnaa baskiisa ilaa 1.5 saacadood. Darawalka ayaa u keenay Eyga martida shaqaalaha Antalya Metropolitan Municipates Guriga Daryeelka Ku-meelgaarka ah isagoo rajeynaya inuu dib ula midoobo milkiilaha.
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in eeyga uu si wanaagsan u dhaqmay intii safarka lagu jiray uuna raacay amar kasta, 07 AU 0180 darawalka baska gaarka loo leeyahay ee Taner Özgün, oo ka hadlay dhacdada, ayaa sharraxay: 01:13.10 aroornimo, saaxiibkeen jecel ayaa booday baska meesha baska taagan 100. Yıl Avenue. Waxaan mooday inay qabow tahay. Waxaan ogaaday inuu yahay xayawaan qoorta sudhan oo fulinaya amar kasta oo lagu hadlo. Wuxuu ahaa nin qurux badan oo dadnimo badan. Mid ka mid ah rakaabkii ayaan ka codsaday inuu ilaaliyo. Wuxuu ka degay baska istaagga Kuliyadda Caafimaadka. Waxaan u qabanay si aanan u lumin oo aan ugu dul saarno baska. Waxaan wacay Ambalaaska Xawaaladda Dawladda Hoose ee Magaala Weyn waxaan rajaynayaa in milkiilaha la helo. Ka dib markii aan saarnaa baska qiyaastii 1.5 saacadood, waxaan u dhiibay askarta joogsi ugu dambeeyay Varsak. Damiirkaygu uma oggolaanin inuu keligiis waddada uga tago. Waxaan rajeynayaa in mulkiiluhu uu soo bixi doono sida ugu dhaqsaha badan.
MACLUUMAADKA DIIWAANKA EE GOLDEN
Dhakhtarka xoolaha ee xanaanada xoolaha, oo xiriir la leh Agaasinka waaxda caafimaadka xoolaha ee degmada Antalya Metropolitan Dowlada Hoose, eey heshay eyga, ayaa la sheegay in eeygu ay yihiin Ey digaag ah oo digaag ah qiyaastii XNUMX sano iyo bar jir mana jirin wax dhibaato ah oo xagga caafimaadka ah. Eeyga, oo loo maleynayo inuu leeyahay, ayaa wuxuu mulkiilaha ka sugayaa Xarunta Daryeelka Ku-meelgaarka ah ee Dawladda Hoose ee Magaalada Caasimadda.
Xeebaha qaniinyada ah markay sugayaan taraamka
Saldhigga Tareenka ee ITU Ayazaga Guri Ambulance ayaa la dhigay
Ey Ey magan gelyo baska markay hawadu qabow tahay
Khadka baska ee Varsak Kulliyaadka Varsak